January 2021 | Umbele
UMnu uHlobo Mbube umnikazi weHlobo Mbube Creatives eyenza izicathulo namabhande kwesikhumba
UNEMINYAKA eyishumi eziphilisa ngokwenza izikhwama, izicathulo namabhande ngesandla kwesikhumba uMnu uHlobo Mbube weHlobo Mbube Creatives eBhayi, eMpumalanga Kapa.
UNkk uZodwa Radebe weSomana Dignified Funerals nesinye sezisebenzi zakhe u-Ayanda Radebe
KUSUKELA kuqale le nyanga abangcwabi bakhala isililo esifanayo ngokucinana kotshumo ngenxa yemingcwabo eminingi. Ngaphezu kokushoda kwemigodi, kuke kwashoda ngisho amabhokisi kanti njengoba esetholakala nje, asemba eqolo.
NAMHLANJE ngithanda sibheke izindlela eziqavile zokuhlobisa ibhizinisi lakho. Ngifuna sibheke ukuthi kungani amabhizinisi amaningi amancane engalihlobisi ibhizinisi lawo.
UMnu uMandisa Shabangu, owenza ifenisha yekhethelo nezimpahla zokugqoka i-Abuti Apparel ethekela ulwazi kusomabhizinisi uMnu uVusi Thembekwayo
NGENXA yokuthi kuyaphileka ngokuzisebenza, umnikazi webhizinisi lefenisha yekhethelo uthi akaziboni esebenza ku“mlungu”.
UNksz uZodwa Msimang usihlalo we-Ikhono Thrive Global
KWASHESHE kwamcacela uma eqala ukuhlela imicimbi ukuthi uselutholile ubizo lwakhe nokungakho namanje esaqhubeka nalo msebenzi yize sekukhona ushintsho endleleni okwenziwa ngayo ngenxa yokuhlasela kweCOVID-19.
UMENGAMELI uThabo Mbeki uyokhunjulwa emlandweni waseNingizimu Afrika yentando yabantu njengomengameli owayekhuthele kodwa ikakhulu owaqhakambisa ubu-Afrika ekwenzeni izinto. Loku kwakumqoka. Kepha futhi uyokhunjulwa njengomengameli okwabhubha izinkumbi zabantu ngenkathi ebambe amatomu ombuso … Read More
UMnu uPhilani noNkk uZimbili Mazibuko baphila ntofontofo ngenxa yebhizinisi inetwork marketing
“UMA uthola ithuba lenetwork marketing oliqonda kahle, ngicela ulisebenzise mfowethu noma dadewethu. Kuzothatha iminyaka engaphezu kwemibili ukuthi noma yimuphi umnotho uvuseleleke. Inqwaba yemizi nezimoto kuzodliwa kanti iyodwa kuphela indlela esizophuma … Read More
NGESONTO elidlule sibuke ukuguqulwa komqondo njengoba singena ku-2021. Namhlanje ngifisa sibheke loku okubizwa ngenqubomgomo yezamabhizinisi, phecelezi i-business model canvas.
UNksz uKekeletso Tsiloane weRamatsilo Trading
PHAKATHI kuka-2016 no-2018 uNksz uKedibone Tsiloane weRamtsilo Trading ubegoduka ngempelasonto asuke eGauteng alibangise eSasolburg, eFree State, afike axove usimende nenhlabathi bakha ama-blocks nodadewabo uKekeletso, ababambisene naye kule nkampani.
SAWUBONA, halala mfundi wale ngosi ngokweqela ku-2021. Nokuba ufunda le ngosi yokuqala ka-2021, kusho kona ukuthi uNkulunkulu usakuthandile nanamhlanje; wakupha isipho sempilo. Ngaloko kufanele sonke simbonge ngomusa ongaka. Ngiyathemba ukuthi usazoba nathi, asiphe umusa osanele sonke ukuze nami ngiqhubeke nokuphakela isizwe nabantu baKhe ukudla kwengqondo, nani nikhongozele nincele kogwansile.